DEPIOTEN’i FENOARIVO ATSINANANA : Vonona hanara-maso ny fanatanterahana ireo tetikasa nampanantenaina
Raha ny tokony ho izy, 17 octobre 2019
« Tsy tokony hisy intsony ny vato misakana ny mpitondra fanjakana amin’ny firosoana amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa marobe nampanantenaina tamin’ny vahoaka », io no hafatra nataon’ny depiote Angelica Michelle, nandritra ny fotoam-pametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny samboadin’ireo depiote voafidy tao amin’ny faritanin’i Toamasina izay notanterahina tamin’ny sabotsy lasa teo. Raha tsorina, hoy izy, dia efa nahavita ny adidiny ireo solombavambahoaka tamin’ny fampandaniana ny praograman’asa amin’ny ankapobeny fitondram-panjakana na ny PGE. Natolotra teo anoloan’ny antenimieram-pirenena izany PGE izany ary nofidian’ireo depiote tsy an-pihambahambana. Amin’izao fotoana izao, manara-maso ny fahefana mpanatanteraka sisa no tena imasoan’ireo depiote.
Manoloana izany rehetra izany anefa, dia tsy nisalasala ihany koa ity depiote izay sady filoha lefitry ny antienimieram-pirenena ity nilaza fa “mahatoky tanteraka ny fitondram-pajakana, indrindra ireo fahefana mpanatanteraka izy ireo. Na izany aza anefa, tokony hiandry am-pitoniana ny fanatanterahana io praograma ankapobeny fitondram-pajakana io ihany ny vahoaka Malagasy », hoy hatrany ny nambarany. Ity farany, izay nanamafy fa tsy tokony hikoropaka sy ho taitaitra ny rehetra, satria ny Filoham-pirenena tsy mbola namitaka ny vahoaka velively. Olona mitana ny teny nomeny raha i prezida Andry Rajoelina, hoy hatrany i Angelica Michelle. Antenaina araka izany fa hahazo ny anjara fampandrosoana nampanantenaina azy ireo avokoa ny distrika rehetra mandrafitra ny faritanin’i Toamasina. Singanina manokana amin’izany ny ao Fenoarivo Atsinanana, toerana izay nanaovan’ity depiote vehivavy ity pao-droa tamin’ny fifidianana depiote lasa teo. Eo amin’izay resaka fampandrosoana izay hatrany, nanome hafatra ho an’ny vahoaka ihany koa i Angelica Michelle.
Tsy miankina amin’ny mpitondra irery, fa miankina bebe kokoa amin’ny vahoaka Malagasy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. “Tokony hiray hina isika rehetra, fa tsy hozarazarain’ny tsy fitovian’antoko na firehana politika. Aza hadinoina fa ny firaisankina no hery, ary izay mitambatra dia vato”, hoy hatrany ny kabary nataon-dramatoa Angelica Michelle, depiote voafidy tao Fenoarivo Atsinanana.